July 2020 - Page 10 of 36 - Myanmar Fire Services Department
Falling in the well at No(3) Quarter, Kantbalu township, Sagaing Region
editor | Jul 24, 2020 | News, ထူးခြားဖြစ်စဉ်, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးသတင်း
23.7.2020 at about 07:15- Mg Nyi Nyi Zaw fall in the well of in length (4) feet and depth (35) feet at No(3) Quarter, Kantbalu township, Sagaing Region. According to the report, 16 members of Kantbalu District Fire Station with2Firefighting Vehicles responded to the...
Fallen tree at Nankham Village, Wuntho Township, Sagaing Region
23.7.2020 at about 04:00- A Padauk tree(5 feet in girth and 45 feet tall) fall down on the roof of the train station due to the heavy rain at Nankham Village, Wuntho Township, Sagaing Region . At about 06:30,4fire services personnel and5auxiliary members of...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြိုနယ်၊ သစ်ဆိမ့်ကုန်းကျေးရွာအနီးတွင် ချောက်ထဲသို့ ယာဉ်ပြုတ်ကျတိမ်းမှောက်မှုသတင� ....
၂၃.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၄ ၂၀ အချိန်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြိုနယ်၊ သစ်ဆိမ့်ကုန်းကျေးရွာအနီးတွင် ယာဉ်မောင်း ဦးဝင်းသန်း မောင်းနှင်လာသော ထော်လာဂျီ(faw)ယာဉ် အမျိုးအစားသည် သစ်ဆိမ့်ကုန်းမှ ကျပ်ပြင်သို့ အရှိန်ဖြင့်မောင်းနှင်လာစဉ် မိုင်တိုင်(၁၁၁/၂)နှင့် (၁၁၁/၃)ကြားတွင်...
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၄၈/၀-၁) ကြားတွင် ယာဉ်တိမ်းမှေ� ....
၂၃.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၂ ၁၅ အချိန်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၄၈/၀-၁)ဖာလုံကြားတွင် ယာဉ်မောင်း ဒေါ်နန်းစန်းစန်းအေး မောင်းနှင်လာသော FORTUNER (အနက်ရောင်)ယာဉ်အမျိုးအစားသည် ရှေ့ဝဲဘီးပေါက် ၍ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဖြစ်ကာ...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ ဟံမြင့်မိုရ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇလဲကျေးရွာတွင် နေအိမ်မီးလောင်မှုသတင်း
editor | Jul 24, 2020 | News, မီးလောင်မှုသတင်း
၂၃.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ ၁၁ ၀၀ အချိန်ခန့်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ ဟံမြင့်မိုရ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇလဲကျေးရွာတွင် အိမ်ရှင် ဒေါ်စန်းစန်းမော်၏ (၁၅×၁၅)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ ဝါးကြမ်းခင်း၊ လူနေအိမ်ဘေးရှိ (၆×၆)ပေ၊ သွပ်မိုး၊ ထရံကာ၊ မြေစိုက်မီးဖိုဆောင်တွင်...
Page 10 of 36« « Previous...89101112...2030...Next »